Chitatu, Kurume 31, 2021 Chitatu, Kurume 31, 2021 Douglas Karr
Ndiine CodePen, ndakakwanisa kuita basa rese rinodiwa kuita shambadzira karukureta Ini ndakadzika mune saiti. Zvizhinji zvisikwa paCodePen zviri pachena uye zvakasununguka sosi. Izvo zvinhu zvipenyu izvo vamwe vanhu uye nharaunda vanogona kushamwaridzana nazvo, kubva pane yakapfava moyo, kusvika pakusiya chirevo, kuita forogo uye kuchinja kune zvavo zvavanoda.
NaCodePen, unogona kuchinja maonero ako kana uchida kuti panes dzive kuruboshwe, kurudyi, kana pasi paunenge uchishanda… kana kuona iyo HTML mune itsva tebhu. Rutivi-ne-padivi maonero rinoshanda zvisingaite mushe kuyedza ako ekuteerera marongero sezvo iwe uchigona kugadzirisa saizi yeinoonekwa pane.
Iwe unogona kuronga yega yega yako anoshanda zvinyorwa muPeni, uasanganise iwo maPurojekiti (akawanda-faira mupepeti), kana kunyange kuvaka kunze kuunganidzwa. Chaizvoizvo iri inoshanda portfolio saiti yepamberi-kumagumo kodhi uko iwe kwaunogona kutevera vamwe vanyori, forogo mamwe akagovaniswa pachena mapurojekiti mune ako ako kugadzirisa, uye kunyange kudzidza maitiro ekuita zvimwe zvinonakidza zvinhu kuburikidza nematambudziko.
Unogona kusevha seGitHub Gist, kuburitsa mu zip faira, uye kunyange kuvhara chinyoreso mune chinyorwa chakadai.
Yakafanotaurwa Kutengesa Kukanganisa Kwepamhepo Ongororo by Douglas Karr (@douglaskarr)
Ndinokukurudzira kuti unyore. Iwe unozonyorerwa kune yavo email yevhiki uye unogona zvakare kuwedzera iyo feed kune yako RSS feed kuti iwe ugone kuona achangoburitswa mapeni. Uye, kana iwe ukatanga kutsvaga kana kubhucha mapeni eruzhinji ipapo, iwe unowana mamwe anoshamisa mapurojekiti… vashandisi vane tarenda rakakura!
tevera Douglas Karr paCodepen
Iyo yakabhadharwa vhezheni, CodePen Pro, inopa toni yekuwedzera maficha ekuvandudza mashandiro kana zvikwata - kusanganisira kudyidzana, maitiro, kuitisa zvinhu, zvakavanzika maonero, uye kunyange kuendesa mapurojekiti neako wega domain kana subdomain. Uye, hongu, CodePen inopa yakakura repository pamwe neGithub kusangana uko yako yese timu inogona kushanda. Kana iwe uchingoda kuyedza imwe yakapusa kodhi seni, CodePen chishandiso chakakosha.